Ihe Ndị Dị Mmadụ
Ihe ndị a na - akọ
Ụzọ a na - akpọsa
Ụzọ a Na - akụkụ Akwụkwọ
Ụzọ n’Ebe Ụzọ
Ebe ebe usoroiheomume
Ụzọ a na - achọ n’azụ
Ahụ ígwè a gbawụsa
Ụzọ n’Ụlọ Ọkụ
Ịgba Ụlọ Ọkụ
Ụbọ a na - akwụ n’akwụkwọ
Ụbọbọ ụgbọ n’ahụ́ n’ahụ́
Ịgba ígwè a na - agbawanye n’ọrọ
Ochie:Selection of metal coil drapery fabric
Ọzọrụ:Steps to install chainmail curtain
Ụzọ a ga - eji egwú a na - akwụsị n’ebe a na - akwụsị n’ebe a na - akwụsị n’ahụ́
Ụzọ ịkụỤlọ a na - akwụsị n’ahụ́N’ebe a na - enwe mfe dị nnọọ mfe. Nke mbụ, a na - etinye otu ụgbọ mmiri n’okpuru, a na - emekwa ụgbọ mmiri ndị ọzọ nile n’elu n’elu ígwè a na - akpọ n’ahụ́. A na - egbo...
Ịkwasị nke ọ̀tụ̀tụ̀ òtù Drapery
Dị ka òtù ahụ si kwuo,Ụzọ ígwè DraperyA na - ekewa n’ime eletrik ígwè Drapery na a na - enwe oké nri Drapery.Ọkpụkpụ ụgbọ mmiri na - eletrik bụ́ Drapery: ọ bụ ụgbọ mmiri na - eji ụgbọ mmiri na - akpọ....
Olee uru ndị a na - ewu ewu ewu n’ebe a na - arụ owuwu?
Olee uru ndị ga - abara n’azụỤkwụN’owuwu ụlọ?N’ọrụ owuwu owuwu, a pụrụ ikwu na ụlọ ọrụ ahụ dị ebe nile. Anyị ekwesịghị ịma ọha na ihe mere anyị ji mara ya. Mgbe a na - echebe ụlọ ọrụ ahụ, ọ ga - enwe ...
Ụdị nche nke a na - eme ka a na - egbochi ụkwụ
Ndọrọ nke e nwere n’ịkwụA na - akọ n’ụfụ:Nke a na - eme ka a ghara ịna - egbukepụ n’obodo a na - enwe n’ụzọ dị iche iche, n’ihi ya, ọ dị mkpa iji mee ka ọ̀tụ̀tụ̀ na mmetụta nke usoro ahụ.N’ozuzu, a na...
Ihe ndị mere e ji kwesị ịnọ n’ebe a na - akwụsị n’ahụ́
Site n’otú ndị na - azụ ihe si ele ihe anya, ndị ahịa anyị na - amata ụlọ ọrụ anyị n’ebe nile1 Ịkwọ Ọma, ụlọ ọrụ ahụ nwere ìgwè ndị ọkachamara nke ndị na - edepụta ihe, ndị ọkà mmụta nwere ahụmahụ na ...
Ihe ndị e ji ákwà íṅụ
Àgwà nke aÁkwà e ji ígwe:1. A na - eme ka ákwà a na - akpọ n'ahụ́ n'ahụ́ dị elu, aluminium alloy, brass, kopa na ihe ndị ọzọ. N’ihi ya, ákwà ígwè nwere ákwà dịgasị iche iche ndị mmadụ ga - ahọrọ. Ụdị ...
Ịrụ ákwà e ji ákwà e ji ígwú
Ihe n'ahaÁkwà e ji ákwà aṅụ:(1) Ọ bụ ihe ndị a na - eme n’ihe ndị dị nta, dị obere na nke dị nro, bụ́ ndị a gafee, Dị ka a kparịrị ya ma jikọta ya.(2) ákwà a na - eji ákwà a na - eji ákwà e ji ígwè n’...
Ihe a na - akụ n’agbụIhe ọmụma zụrụ:1. Họrọ ákwá ahụ dakwasị n’ihe ndị a na - enwe, nhọrọ ya bụ ihe bụ́ isi nhọrọ, Ị ga - ahọrọ ákwà ma ọ bụ nri ígwè. Ọ dị mfe imeghe ma mechie, ọ pụkwara imeghe windo...
Ngosi ebeEast industrial Zone, Anping, Hebei, China
Copyright©Ụzọ n’Ebe Ụzọ